Pep Guardiola Oo Kala Doortay Midka Wanaagsan Valdez, Neuer Iyo Ederson.
Home Horyaalka Ingiriiska Pep guardiola oo kala doortay midka wanaagsan Valdez, Neuer iyo Ederson.
Tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa ku tilmaamay Ederson inuu dhaafay wixii ugu fiicnaa ee uu ka arko goolhaye Baas dheer oo uu siiyey helay Ilkay Gundogan kulankii ay 3-0 kaga badiyeen Premier League kooxda Tottenham sabtidii ayaa ka dhigtay mid sameeyey hadal heyn weyn.
Guardiola ayaa horey u soo jeediyay goolhayaha inuu noqon karo rigoore tuure kooxda City taasi waa awoodiisa cagihiisa Ka dib markii uu la soo shaqeeyay Manuel Neuer kooxda Bayern Munich iyo Victor Valdes Barcelona Guardiola wuxuu sheegay in Ederson uu yahay nin ugu fiican dhanka baasaska.
Cagahiisa, waa kan ugu fiican. Tayada baasaska, waxaan dhihi lahaa, waa kan ugu fiican, ”ayuu yidhi. “Manuel iyo Victor sidoo kale waa cajiib laakiin tayada baasku waa kan ugu fiican Ma dhihi karo yaa ugu fiican guud ahaan maxaa yeelay waxaan hore ugu guuleystey ilaaliyeyaal cajiib ah Victor, Manuel iyo Eddie.
Waxa uu ku amaanayaa maamulaha, shaqaalaha qolka jiifka iyo ciyaartoy. Waa nin cajiib ah wuuna ogyahay Laakiin ciyaartoydu way ogyihiin haddii aad rabto amaah iyo in lagu aqoonsado ku guuleysto kulamada ku guuleysi koobab waadna heli doontaa.
“Haddii aadan badinin kulamada iyo cinwaanada, ma heli doontid. Tani kama dhib badna tan City ayaa leh 7 dhibcood oo nadiif ah miiska Premier League ka hor inta aysan booqan Everton arbacada.
Previous articlejuventus iyo Roma oo isku heystaan xidiga wadanka Poland Milik.
Next articleReal madrid oo qorsheyneysa in 90 Million kusoo qaataan Halland.